Nepal Deep | सामाजिक सञ्जालबाट सामान बेच्नु र इ-कमर्श फरक कुरा हुन् : किरण तिमिल्सिना
सामाजिक सञ्जालबाट सामान बेच्नु र इ-कमर्श फरक कुरा हुन् : किरण तिमिल्सिना
शुक्रबार, पुष १० २०७७
काठमाडौँ। विश्व विख्यात फोर्ब्स पत्रिकाको ‘एसिया फोर्ब्स ३० अण्डर ३० २०२०’ मा नेपालको तर्फबाट परेका ६ जना नेपाली मध्यका एक यूजी बजारका संस्थापक किरण तिमिल्सिनासँग उनका सुरुवाती दिन देखिका अनुभव, नेपालमा अनलाइन बजारको विस्तारबारे नेपालदीपको तर्फबाट विशाल पौडेलले गरेको कुराकानी:
सुरुवाती दिन देखि अहिले सम्मको व्यवसायिक यात्रा कस्तो रह्यो? त्यसबारे बताइदिनु होस्?
हाम्रो सुरुवात ट्रेस गर्न सन् २०११मा फर्किनु पर्ने हुन्छ। त्यतिबेला हामीले ‘अर्बन गर्ल’ भन्ने कम्पनी दर्ता गरेर मध्यम वर्गीय महिलाहरुले प्रयोग गर्ने सामानहरु जस्तै: नक्कली गरगहना, कस्मेटिक आइटमहरु अनलाइनबाट बेच्न थालेका थियौं।
हामीले युवाहरुलाई मध्यनजर गरेर काम गरिरहेका थियौं। हामीले व्यवसाय विस्तार गर्ने सोच्यौं। प्रारम्भिक अध्ययन गर्यौ। त्यसपछि २०१५ मा आएर हामीले यूजी केक सुरु गर्यौ।
त्यतिबेलाको विदेश जाने ट्रेन्ड थियो। हाम्रा ग्राहकहरु त्यहि ट्रेन्डलाई पछ्याउदै विदेश पुगिसक्नु भएको थियो। उहाँहरुले आफ्नो घरपरिवार, साथी भाईलाई गिफ्ट पठाउन चाहनुहुन्थ्यो। र, हामीले नेपालमा बसेर त्यो भूमिका खेली रहेका थियौं। जसले गर्दा हामी विस्तार हुदै गर्दै गयौं।
ति दिनहरु सहज पक्कै थिएनन्। हाम्रो आफ्नै बेकरी थिएन। अरु बेकरीहरुबाट किनेर डेलिभर गर्नु पर्थ्यो। साच्चै भन्दा हाम्रो सेवा राम्रो थिएन। तर विस्तारै हामी सुधार गर्दै गयौं। १७/१८ सम्ममा त हामी धेरै राम्रो गरि सकेका थियौं। हामीहरु स्थापित हुदै थियौं। मिडियाले कभरेज गर्न थालीसकेको थियो। हाम्रा नियमित ग्राहकहरु बढ्न थालेका थिए। त्यसपछि हामी फेरी रुपान्तरित भयौं। ४०-५० जना कर्मचारीहरु लिएर अहिले यूजीबजारको नाममा इ-कमर्श प्लायटफर्म संचालन गरिरहेका छौं। अर्बन गर्ल देखिको यात्रा यूजी बजार सम्म पुगेको छ।
फोर्ब्स यु-३० को सूचीमा समेत पर्नु भयो? कस्तो लाग्यो?
त्यो दिन एप्रिल १ थियो जस्तो लाग्छ। लकडाउनको समय थियो। बिहानै फेसबुकबाट हो कि कसैले फोन गर्यो कि ठ्याक्कै थाहा भएन। जे होस् अरु नै माध्यमबाट आफू उक्त लिष्टमा परेको थाहा भएको थियो।
सुरुमा त विश्वास नै लागेको थिएन। मैले त एप्रिल फुल त बनाइरहेको छैनन् भनेर पनि चेक गरेको थिए।(हास्दै) तर लकडाउनले गर्दा होला चर्चामा चाही आएन।
खुशी लागेको थियो एकदमै। शब्दमा वर्णनीय हुदैनन् त्यस्ता घटनाहरु। हजुरलाई सुनाउ, मलाई सूचीमा पर्नु भन्दा पनि एकदमै खुशी लागेको क्षण भने त्यो थियो जब वर्षौ देखि नबोलेका, स्मृतिबाट नै हराइसकेका, आफ्ना बाल्यकालका ति प्रिय-आत्मीय साथीभाई र शिक्षकहरुले फोन गरेर नै बधाई दिनु भयो। त्यति बेला चाही आफैलाई देखेर एक किसिमको गहिरो खुशी अनुभव भयो।
एक हिसाबले यो सूचीमा म आफू मात्र परेको थिइन। नेपालको तर्फबाट म बाहेक चार जना पनि त्यो सूचीमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली भएकोले त्यो त गर्वको विषय थियो नि।
सूचीमा परेपछिको केहि रमाइलो क्षण?
रमाइलो भन्दा पनि मानिसहरुले यसलाई कसरी लिदा रहेछन भन्ने कुरा देखेर चाही रमाइलो लाग्यो। धेरैले यो सूचीमा परेपछि पुरस्कार, केहि रकम, विदेश भ्रमणहरु होलान भन्ने सोच्दा रहेछन्। बधाई दिने हरुले यसबारे धेरै नै सोधेको पाए। त्यसबाट सिर्फ ‘रिकग्निसन’ मिल्छ भन्दै हैरान भए। तर त्यो सूचीमा पर्नु नै आफैमा गौरववान्वित हुने कुरा हो।
लकडाउन पछि नेपाली अनलाइन मार्केटमा कस्तो परिवर्तन आएको महसुस गर्नु भएको छ?
३-४ वर्ष अघिसम्म पनि अनलाइन बिजनेस धेरै राम्रो थिएन। अनलाइन सपिङ्ग नयाँ कुरा थियो। जे कुरा पनि सुरुमा गर्दा जटिल लाग्छ नि। अनि मानिसहरुले ट्राइ गर्दैन थिए।
तर अहिले ग्राहकको खरिद गर्ने बानीमा चेन्ज आएको छ। कोभिड महामारीले अनलाइन किनबेच बाध्यता नै बनायो।
मैले पोखराको केहि साथीहरुसँग कुरा गर्दा पनि त्यहि प्रतिक्रिया पाएको छु। साथीहरुले त ‘ड्रास्टिक चेञ्ज’ आएको कुरा गर्नु भएको थियो।
पोखरा त काठमाडौँको तुलनामा सानो छ। मार्केट पनि सानो छ। केहि किन्नु परि हाल्यो भने पनि म हेरेर नै किन्छु भन्थे। पसल सम्म पुग्छु भन्ने थियो। लकडाउन अघिसम्म। तर अहिले त्यस्तो छैन रे। अनलाइनमार्फत किनबेच बढेको छ। मानिसहरुलाई अनलाइनबाट नै मगाउने बानी परिसक्यो।
मान्छेलाई एक पटक किन्न गार्हो लाग्ने हो। एक पटक ‘ट्राई’ गरेपछि पटक-पटक गर्न उसलाई गाह्रो लाग्दैन। लकडाउनले ‘ट्राइ’ गर्ने वातावरण बनाइदियो। सजिलो पनि छ नि। घरै बसी बसी सबै थोक गर्न सकिन्छ। डेलिभरी राम्रो भयो भने ग्राहकले अनलाइन माध्यम प्रयोग गर्छन नै।
अर्को तर्फ इ-कमर्सको क्षेत्रमा ठूलो लगानी पनि हुन थालेको छ। दराज, अलीबाबा जस्तै नेपाली बजारमा आइसकेका छन्।
भनेपछि, प्रतिस्पर्धा पनि बढ्ला नि अब?
मेरो विचारमा अहिले देखिएको अनलाइन व्यापार र इ-कमर्शमा फरक छ। अनलाइन मार्फत सामान बेच्नु र प्रविधिमा ध्यान केन्द्रित गरेर आफ्नै अनलाइन माध्यम बनाउनु भिन्दै कुरा हो।
म प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि बजार विस्तार भएको देख्दै छु। त्यो सँगै प्रतिस्पर्धा पनि बढ्ने नै छ।
अनलाइन व्यापार र इ-कमर्शको भेदबारे विस्तार गर्नुस् न?
मेरो नै विचार युनिभर्सल हुनु पर्छ, सबैले मान्नु पर्छ त्यो भन्दिन। तर मेरो विचारमा चाही अहिले देखिएको अनलाइनबाट सामान मगाउने ट्रेन्डमा धेरै पुराना व्यापारीहरु हुनुहुन्छ जसले सामाजिक सञ्जाललाई मार्केटिङ्ग स्पेसको रुपमा प्रयोग गर्नु मात्र भएको छ।
अर्को तर्फ दराज, अलीबाबाहरु, यूजीबजार भनेको आफ्नै माध्यम बनाएर जाने कुरा भयो। दराज नै ५०० करोड लगानी गर्दै छ। त्यसैले यहाँ चाही प्रतिस्पर्धा अहिले नै छैन्। भोलिको दिनमा हुनसक्छ।
अनलाइन व्यापारमा स्टार्टअप गरिरहेकाहरुलाई इ-कमर्स सम्म पुग्न त गाह्रो हुदो रहेछ त?
पक्कै पनि यो लामो यात्रा हो। इ-कमर्स खर्चिलो छ। ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। रजिस्ट्रेसन देखि अपरेसनल कस्ट नै महँगो छ।
उद्यमी बन्न चाहने युवाहरुलाई केहि सुझाव छ?
आफूलाई मन लागेको गर्नु पर्यो। आफ्नो इच्छालाई मार्नु भएन। कतिपय अवस्थामा हामीले सामाजिक दबाबमा परेर हृदयको आवाजलाई बहिस्कार गर्छौ, त्यो गर्नु भएन। आत्म सन्तुष्टिको लागि काम गर्नु पर्छ।
फेरी अरुको कुरा हेरेर आफू हतोत्साही पनि हुनु भएन। सबैको आफ्नै आफ्नै टाइमलाइन हुन्छ। मलाई जुन कुरा २८मा भयो अर्कोलाई त्यहि कुरा ३५को उमेरमा हुन सक्छ। नहुन पनि सक्छ। अवसरहरुको खोजी गर्दै गएपछि राम्रो ठाउँमा पुगिन्छ नै।